Inhlangano - inhlanganisela into noma othile ithuluzi elilodwa yakhelwe ukufeza injongo ethile. Kuyinto, kwakha isimiso esiyinkimbinkimbi, okuyinto empeleni ashukumisayo njalo. Uma ucabangela umsebenzi wenhlangano theory, singaphetha ngokuthi ehlatshwa okungaphansi kwenkululeko ulwazi lwesayensi eziphathelene nemithetho yayo jikelele. Ngokombono ithiyori kwezomnotho, uhlelo zithathwa njengeziNdawo ezingamaGugu imfundo yomphakathi, esihlelwe uyaqaphela futhi kunemingcele ethile futhi ezisebenza ngokungenzi unomphela.
Imisebenzi yenhlangano, oveza ingcebo yezinto ezibonakalayo, esehlanganise zonke izigaba lomjikelezo ukukhiqizwa. Inqubo ukukhiqizwa imikhiqizo siphelile kuhlanganisa ukubunjwa izakhi zalo ezithile. Lezi zihlanganisa umsebenzi, amathuluzi ayo kanye izinto, kanye nolwazi. Ngo umkhiqizo osuphelile livela yi lomjikelezo ukukhiqizwa. Kuyinto umkhiqizo zomsebenzi.
Dedela ingcebo yezinto ezibonakalayo siqukethe izingxenye ezimbili: amabutho ithele kanye nobudlelwane ukukhiqizwa. Inhlanganisela yakha indlela enza inqubo. Amabutho elikhiqizayo kukhona izindlela behileleka okuyinto ekukhiqizeni imikhiqizo. Phakathi nesikhathi lapho imikhiqizo kokuba ekhiqizwa, kanye nokusabalalisa kwalo okwalandela phakathi kwabantu, kukhona ubudlelwano ezithile. Basuke labizwa ngokuthi yokukhiqiza. Le factor futhi subjective. Imisebenzi noma iyiphi inkampani ekhiqiza izimpahla athengiswe inhlangano umsebenzi ubudlelwane zokukhiqiza namabutho elikhiqizayo. Ngamanye amazwi, ngokusebenzisa izinto zangempela futhi siqu.
Ukunikeza imisebenzi yenhlangano zamabutho elikhiqizayo, inkampani is ukusebenzisa Fusion imikhakha impahla kanye subjective. Umuntu wenza imisebenzi ethile ngesikhathi senqubo, usekhonza njengomshumayeli wesikhathi isici siqu. Izinto namathuluzi ziyimbangela yangempela. Target inhlangano ukukhiqizwa iwukwenza ndawonye ukuqinisekisa ukuxhumana kahle futhi inhlanganisela Abahlanganyeli inqubo ngesikhathi nendawo.
Imisebenzi yenhlangano zokukhiqiza ezibonakalayo sihlanganisa izenzo okubhekiswe ekusunguleni ukuxhumana ngempumelelo phakathi izingxenye ezahlukene wemboni kwamabhizinisi kanye subjective. Ubuhlobo okuyinto akhiwa phakathi izici yenqubo zobuchwepheshe ziyinkimbinkimbi futhi ahlukahlukene. Bahlanganisa subgroups ezimbili. Lezi zihlanganisa ukukhiqizwa kanye nobudlelwane lobuchwepheshe kanye nezenhlalakahle. Uhlobo lokuqala kunobuhlobo obuthile phakathi amalungu ethimba umsebenzi ngokuhlanganyela. Ngesisekelo idatha uxhumano ukubambisana kanye nokwahlukaniswa kwemisebenzi. Kuyinto mibandela balulaze imisebenzi ngabanye kanye abaculi zabo. Kule ndaba, futhi kukhona isidingo ukusungula ubudlelwano obukhona phakathi kwabo. Lo msebenzi kuyingxenye ukuphathwa inkampani.
Ngo inqubo ukukhiqizwa kunesidingo ukudala izimo ezithile. Lona omunye umsebenzi wenhlangano. Ngesisekelo zonke izingxenye inqubo ukudala izimo ezifanele kunikela ibhizinisi njengoba eziyinkimbinkimbi olulodwa bese andise inzalo abasebenzi e imiphumela yomshikashika wabo. Lokhu kusebenza inhlangano lomjikelezo ukukhiqizwa kusekelwe ubudlelwane izimo zenhlalo yomphakathi nezomnotho phakathi kwabantu yakhiwa uhlobo ukwabiwa kwezimali izindlela zokukhiqiza.
Inkampani okuhloswe ukufuna izixazululo inkinga, ikuvumela ukudala zonke preconditions kudingekile ukuthi izodlala indima enkulu ekukhuliseni ikhwalithi yomsebenzi we kubasebenzi abasebenza, ekukhuleni kwayo eziphathelene nenhlalo namasiko kanye nezobuchwepheshe, kanye ukuqinisa Uhlaka self-le. Lokhu kusho ukusebenzisa izici eziyinhloko yenqubo ukukhiqizwa.
Ngokuvumelana inqubo ephetha isivumelwano umsebenzi, noma umsebenzi ezivikelwe ngumthetho
Ingxenye okwesikhathi ingane iminyaka engu-15: ongakhetha umsebenzi
Ngokuqondene "Beeline" okubhaliselwe isheke bese uzivale?
Indlela yokwenza izigqizo futhi izintelezi ngezandla zakhe?
Tea yezinjinga Pu-erh: contraindications izakhiwo ewusizo
Wedding in blue: Imibono
I-Curd jelly: iresiphi ngesithombe
Maxim Topilin: Biography, umsebenzi
Heat amatafula: injongo, iphetheni onobuhle
Izipho esenzeka ngalo ubudlelwane umfana, yini olukhethayo olulodwa yakho?